Sommet de la SADC : Madagascar sera représenté au Malawi - ewa.mg
News - Sommet de la SADC : Madagascar sera représenté au Malawi
La participation de Madagascar au Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Comité de Développement de l’Afrique Australe (SADC) qui aura lieu au Malawi, du 9 au 18 août prochain a été adoptée durant le Conseil des ministres qui s’est tenu hier au Palais d’Etat d’Iavoloha. La tenue de cette rencontre a été décidée durant le sommet extraordinaire qui s’est déroulé au Mozambique au mois de juin dernier. La mise en œuvre du plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP 2020–2030), et l’évolution de la réalisation de la feuille de route de la SADC dans le domaine de l’industrie figureront à l’ordre du jour de ce sommet. Ce sera aussi une occasion pour le comité chargé des Finances et celui en charge des ressources humaines et de l’administration, de présenter leur rapport d’activités. Le Conseil des ministres a aussi adopté l’octroi de 6 porte-chars et 6 camions-tracteurs au profit du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation pour faciliter la réhabilitation des routes communales, dans le cadre du programme « Nouveaux Projets d’Emergence » (NPE). Comme à l’accoutumée, le Conseil des ministres a validé la nomination de quelques hauts employés de l’Etat. Notamment au niveau du ministère de l’Education Nationale où Serge Dieu Mamba vient d’être nommé Directeur de l’Education non formelle. Le ministère de l’Environnement et du Développement durable dispose désormais d’un nouveau Secrétaire général en la personne de Andry Fidiniaina Moïse Rasamoelina. Pour ce qui est du ministère de la Communication et de la Culture, José Dominique Andriantseheno vient d’être nommé Directeur de l’ISSM.
L’article Sommet de la SADC : Madagascar sera représenté au Malawi a été récupéré chez Midi Madagasikara.
FAHATAPAHAN-JIRO :: Manana olana amin’ny fitsinjarana herinaratra ny Jirama
Saika ho isan’andro. Miaina anaty haizina ny mponin’ Antananarivo. Manana olana amin’ny fitsinjarana herinaratra fa tsy ny famokarana ny orinasa Jirama, amin’izao fotoana izao. “Marihiko fa any amin’ny fitsinjarana herinaratra isika izao no manana olana fa tsy any amin’ny famokarana. Tena ampy tanteraka hamatsiana ny eto Antananarivo izany. Nisy ihany koa ny fahatapahana vokatry ny varatra nilatsaka tao Andekaleka saingy tsy naharitra loatra izany fa teo amin’ny adiny iray teo raha be indrindra. Antananarivo iray manontolo mihitsy no tsy nisy jiro, omaly (Ndrl:afak’omaly) teo anelanelan’ ny 8 ora hatramin’ny 9 ora alina”, hoy Andriamampionona Tsitohery Francesca, talen’ny serasera eo anivon’ny orinasa Jirama. Olana teknika vokatry ny toetry ny andro sy ny fahanteran’ ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana ampiasaina ao amin’ny orinasa ihany koa no mitarika izany fahatapahana herinaratra izany. “Taorian’ny fahasimban’ny “transformateur” roa lehibe tao Ambodivona dia ny toetr’andro no tena anisan’ny nahatapaka ny jiro nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Betsaka no tsy manaiky fa kotroka sy rivotra no mahatonga izany. Rehefa mikotroka be ny andro dia milatsaka tampoka ny fiarovana tambajotran’ny Jirama. Tsy afaka tonga dia mamerina avy hatrany ny orinasa rehefa misy ny fahatapahan-jiro fa tsy maintsy miandry fotoana kely arakaraka ny fampilazana avy any amin’ny mpanjifa”, raha ny fanazavany hatrany Faritra maromaro teto Antananarivo renivohitra no niaina tao anaty haizina nandritra ny ora maro tao anatin’ny andro vitsivitsy izay. L’article FAHATAPAHAN-JIRO :: Manana olana amin’ny fitsinjarana herinaratra ny Jirama est apparu en premier sur AoRaha.
Varotra hosoka :: Vehivavy nahazo an-jatony tapitrisa ariary tamin’ny fisolokiana
Efa mahatratra dimampolo sy roanjato tapitrisa ariary ny vola azon’ity vehivavy iray, manodidina ny efapolo taona, tamina fisolokiana nataony, araka ny valin’ny famotorana nataon’ny polisy. Voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava (BC), tamin’ny sabotsy lasa teo izy. Fisolokiana avo lenta amina varotra merikiora no nanenjehana azy. Naharay fitoriana telo sy fijoroana vavolombelona maro momba an’io vehivavy io ny polisy. Nilaza ho manana sy mivarotra merikiora, ka maka volabe amin’olona izy. Fantatra fa efa hatramin’ny taona 2017 izy no naka vola tsikelikely tamin’ireo mpividy izay resiny lahatra. Nambarany fa hanaovana sorona ny vola nalainy. Tamin’ny volana febroary teo no tokony ho nanomezany ny merikiora saingy nanomboka tsy hita popoka izy taorian’izay. Nametraka fitoriana teny amin’ny polisy, noho izany, ny mpividy telo voafitaka. Nidinan’ny polisy tao an-trano, teny Andavamamba, ilay vehivavy mpisoloky, ny sabotsy antoandro. Nahatrarana karazana fitaovana fampiasany hamitahana olona tao an-tranony. L’article Varotra hosoka :: Vehivavy nahazo an-jatony tapitrisa ariary tamin’ny fisolokiana est apparu en premier sur AoRaha.
Ankarana: tafapetraka ny Fari-piarovana sy Fandriampahalemana (ZDS)
Naseho tamin’ny fomba ofisialy ny kaomandin’ny fari-piarovana sy fandriampahalemana Ankarana (ZDS), ny Jly Montrouge Fitzerald. Nitarika ny lanonana tany Antsiranana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard. Nitondra fanazavana mahakasika ny fandrosoan’ny fanavaozan-drafitra misy eo anivon’ny Tafika Malagasy sy ny vokatr’izany amin’ny fiainam-bahoaka ity manamboninahitra ity. Nambarany tamin’izany fa ny ZDS dia rafitra vaovao manolo ny faritany miaramila teo aloha ka ny ZDS Ankarana, araka izany no miandraikitra ny fandriampahalemana amin’ny faritra avaratry ny Nosy, izay eo ambany fitantanan’ny governoran’ny faritra. Miandry vokatra azo tsapain-tanana avy amin’ny kaomandin’ny ZDS ny vahoaka malagasy, indrindra ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana, araka ny nambarany. Nohazavainy koa ny fametrahana ny 2ème Bataillon d’infaterie de Marine any an-toerana mba hanana tafika afaka mihetsika avy hatrany manolona ny tsy fandriampahalemana eny an-dranomasina sy ny fiarovana ny sisin-tanin’i Madagasikara. Nohatsaraina ny fitaovana rehetra ampiasaina toy ny fitaovam-piadiana, ny fanamiana ary ny fari-piainan’ny miaramila mba hahafahan’izy ireo mifantoka amin’ny asany, hoy izy. Nankasitraka ireo miaramila mpitsabo ao amin’ny hopitaly miaramila Antsiranana, izay misehatra eo anivon’ny hopitaly izy amin’ny fikarakarana ireo mararin’ny Covid-19.Jean ClaudeL’article Ankarana: tafapetraka ny Fari-piarovana sy Fandriampahalemana (ZDS) a été récupéré chez Newsmada.
Niala i Maldive: handray ny Lalaon’ny Nosy i Madagasikara
Tapaka, ny alahady lasa teo, nandritra ny fivorian’ny vaomiera misahana ny “Lalaon’ny Nosy” (CIJ), fa homena an’i Madagasikara ny fampiantranoana ny andiany faha-11, amin’ny “Lalaon’ny Nosy” (JIOI), tanterahina ny taona 2023. Noho ny fialana an-daharana nataon’ny Nosy Maldives, voatondro handray izany, ny antony. Voalaza fa vokatry ny fahasahiranana toekarena mahazo an-dry zareo sy ny fiantraikan’ilay valanaretina Covid-19 ny tsy nampazoto azy ireo hampiantrano ity “Lalaon’ny Nosy” ity.Tonga, amin’ny tanjona iriny izany ny Malagasy satria efa tamin’ny taona 2019 no nanam-paniriana handray izany i Madagasikara rehefa nisalasala ry zareo Maorisianina, tamin’ny fandraisana izany.Voalaza fa i Madagasikara no Nosy manana ny fotodrafitrasa betsaka ahafahana mifaninana amin’ireo taranja samihafa. Azo antoka izany fa tsy maintsy hitombo ny isan’ireo taranja hifaninanana amin’ity andiany faha-11 ity. Fanintelony amin’izao i Madagasikara ny mandray ny “Lalaon’ny Nosy” (1990, 2007 ary 2023). TompondakaL’article Niala i Maldive: handray ny Lalaon’ny Nosy i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Loholona Imbiki Herilaza : “Mila mifanatona ny mpitondra sy ny mpanohitra”
Maromaro ireo naneho hevitra ny amin’ny hirosoana amin’ny ”Ady gasy”. Anisan’ny mirona amin’ny hifampiresahana koa ny filoha lefitry ny Antenimierandoholona, Imbiki Herilaza.“Anisan’ny adidy amin’ny maha loholon’i Madagasikara, miantso fifankatiavana sy fifampihenoana. Na ny mpitondra na ny mpanohitra na ny eo anelanelany, mila mifanatona sy mifampihaino ary mifanaja mba ho tombontsoan’ny vahoaka malagasy, ary manabe sy mananatra ary manoro ny lalana tokony ho izy ihany koa ho an’ny zanatsika sy ho an’ny vahoaka malagasy mitovy amintsika.”Io ny fanehoan-kevitry filoha lefitry ny Antenimierandoholona miandraikitra ny faritra avaratra, ny loholona Imbiki Herilaza, manoloana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Mba ho lalana izorana miaraka ny fampandrosoana ny zava-misy ho an’ny firindran’ny fiarahamonina. Rehefa henoina ny feon’ny fieritreretan’ny rehetra, tsara ny fahasamihafana. Tsy misy zavatra tonga lafatra izany, raha mpitondra ny olona. Mety misy hatrany ny indro kely amin’izany.Tokony hatao ao anatin’ny filaminana ny fanoherana“Tokony hatao ao anatin’ny filaminana izany ny fanoherana, tokony hatao ao anatin’ny fitsinjovana ny tombontsoan’ny vahoaka malagasy”, hoy izy. Satria ireo krizy politika sy ireo fifandonana, izay indraindray lasa fifandonana mitam-basy, no hita teto Madagasikara: ny vahoaka malagasy hatrany no voa mafy amin’izay.Satria mihamihemotra ny firenena amin’izany, miharava ny fihavanana. Matetika, misy lonilony hatrany. Izay ny mahatonga antsika tavela amin’ny fampandrosoana. Betsaka ny firenena niara-niainga amin’i Madagasikara ary vitsy ny firenena manana harena an-kibon’ny tany sy harena an-dranomasina ary vakoka rehetra ananantsika nefa ny toe-tsaintsika matetika no tsy ahazoantsika mandroso.R.Nd. L’article Loholona Imbiki Herilaza : “Mila mifanatona ny mpitondra sy ny mpanohitra” a été récupéré chez Newsmada.
30 ireo mpiasan’ny fahasalamana hiady amin’ny kere
30 mianadahy ireo mpiasan’ny fahasalamana hidina any atsimon’ny Nosy handray an-tanana ny fahasalaman’ireo olona marefo tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mivaivay any atsimon’ny Nosy.Nanaingany alahady teo teny amin’ny tokotanin’ny HJRA ireo hamita ny iraka nampanaovina azy. Ahitana dokotera 15 sy paramédicaux 15 izy ireo, hamonjy ireo mpiray tanindrazana mitofezaky ny hanoanana noho ny kere.Hanatanteraka ireo paikady isan-karazany hamongorana ny kere ireo ekipa ireo, eo ambany fiahian’ireo tale dimy, izay hanara-maso ny asa miandry.Faritra dimy ( Ampanihy , Tsihombe, Beloha, Ambovombe , Amboasary ) no hidinan’izy ireo ary aharitra 21 andro izany.Tonga nanome toromarika sy fanamarihana amin’ny fomba hanatanterahana ireo asa goavana miandry, ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ary notsipihiny tamin’izany ny maha sarobidy sy zava-dehibe ny paikady entina iadiana amin’ny tranga tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo izay tokony ho foanana tanteraka.Nitso-drano sy nankahery ny amin’ny ahatomombana an-tsakany sy an-davany ny asa izay ho tanterahan’ireo mpiasan’ny fahasalamana hidina iantsehatra any, andriamatoa minisitra.Tatiana AL’article 30 ireo mpiasan’ny fahasalamana hiady amin’ny kere a été récupéré chez Newsmada.
Manaraka fampivondronana eny amin’ny dobo filomanosana eny Soavina, nanomboka ny alakamisy lasa teo ireo atleta malagasy hiatrika ny lalaon’ny Nosy, hatao any Maorisy, ny volana jolay ho avy izao.Ny federasiona malagasy ny taranja lomano no miantoka tanteraka ny lany rehetra amin’ity fampivondronana ity, raha ny fanazavan’ny filohan’ny federasiona, Jeneraly Ramanantsoa Gabriel. Marihina, tsy isan’ireo taranja nanaraka ny fampivondronana voalohany ny lomano, ka tokony honeran’ny Minisitera izay ho anjaran’izy ireo tamin’izany hiantohana ity fampivondronana faharoa ity. Etsy ankilany, noho ny tsy fisian’ny dobo filomanosana mafana natokana hanaovana ny fanazaran-tena, nisafidy ny hanofa toerana an’olon-tsotra, eny Soavina, ny federasiona hahafahan’ireo atleta miatrika ny fampivondrona manaraka ny fenitra sy ara-dalana tsara.Valo mianadahy ho any SinaEo amin’izay fanomanan-tena izay hatrany, raha toa ka enina mianadahy no fantatra fa hihazo an’i Sina hanohy ny fanazaran-tena, niakatra ho valo mianadahy izany, raha ny isa navoakan’ny Minisitera. Naneho fisaorana manokana ny MJS ny filohan’ny federasiona ny amin’ity vaovao tsara ity. Tsara ny manamarika, afaka roa herinandro no hanomboka ity fiofanana any Sina ity. Miverina eto an-tanindrazana izy ireo, 10 andro mialohan’ny handehanana any Maorisy. Fantatra kosa fa nihena ny isan’ny handeha JIOI, raha ny fanazavana nentin’i Jeneraly Ramanantsoa Gabriel hatrany. 5 lahy sy 5 vavy izy ireo no hiaro ny voninahi-pirenena any Maorisy.Ankoatra ny lalaon’ny nosy, fifaninanana iraisam-pirenena maro no mbola miandry ny ekipam-pirenena malagasy. Mifanindry an-dalana amin’ny JIOI ny fiadiana ny tompondaka eran-tany, taranja lomano, hatao any Korea Atsimo izay handraisan’i Madagasikara anjara. Efatra mianadahy no hiatrika izany, i Tendrinavalona sy i Murielle, manaraka fiofanana any Thailande, ny sokajy vehivavy. I Jonathan sy i Mickael, mianatra any Inde kosa ny lehilahy. Hiatrika ny lalao olympika, amin’ny taona 2020, any Tokyo izay mianadahy mendrika amin’izy efatra ireo, raha ny nambaran’ny filohan’ny federasiona. Hatreto, fanasana avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena hatrany no hahafantsika mandray anjara amin’ireny fifaninanana eran-tany ireny, raha ny fanazavana hatrany. Mi.RazL’article Lomano – JIOI: eny Soavina ny fampivondronana a été récupéré chez Newsmada.
Ny fifaninanana tsapa miandry ny ekipam-pirenena malagasy na Makis sokajy vehivavy amin’ny baolina lavalava, no hanamafisana ny fanazaran-tena etsy amin’ny kianja Andohatapenaka. Hiatrika lalao fanomanan-tena any Tonizia izy ireo, amin’ity volana avrily ity, mialoha ny fifanintsanana hikatsahana ny tapakila hahafahana mandray anjara amin’ ny Lalao Olimpika, any Japana, amin’ny 26 ka hatramin’ny 31 jolay 2021. “Efa vonona ara-batana sy ara-tsaina ireo Makis vehivavy. Hiainga hihazo an’i Tonizia ny delegasiona malagasy, amin’ ny 26 avrily, ary hiverina antanindrazana amin’ny 9 mey 2021, raha tsy misy ny fiovana amin’ny ora farany. Roa amby roapolo mirahavavy ireo mpilalao mivondrona ankehitriny. Mety hisy ihany koa ny fiomanana hatao any Japana, toy ny natao tamin’ny taona 2018”, hoy Rakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy Rugby. Firenena telo no hifampitsapa amin’i Madagasikara: Afrika Atsimo, Kenya ary Tonizia. Voalahatra fa any Monaco (Frantsa) no hanaovana ireo lalao fifanintsanana ho an’ ireo firenena roa ambin’ny folo hiady toerana amin’ny Lalao Olimpika. Ny kianja Stade Louis II no hampiantrano an’ireo fihaonana, amin’ ny 19 sy ny 20 jona 2021, araka ny fandaharam-potoana. Ekipa irika amby roapolo amin’ireo efatra amby roapolo no efa nahazo ny tapakila, hatreto. Toerana roa sisa no hiadiana ho an’ny sokajy vehivavy, ary hifanintsanan’i Madagasikara, Arzantina, Kôlômbia, Frantsa, Hong-Kong, Jamaika, Kazakstan, Meksika, Papoazy Ginea Vaovao, Rosia, Samoa ary Tonizia. L’article Rugby – Lalao olimpika :: Hanoman-tena any Tonizia ny Makis vehivavy est apparu en premier sur AoRaha.
Tontolo iainana sy fanatanjahantena: namboly zana-kazo ny Karate-Tanà Ville
Ho fiarovana ny tontolo iainana sy hampitomboana ny firaisankina eo amin’ny karateka mivondrona ao amin’ny seksiona Antananarivo Renivohitra, nisy ny fambolezan-kazo natao ny herinandro lasa teo, tao amin’ny kaominina Andramasina, Vohitra Tsimahabeomby, fokontany Ambohimarina. Zana-kazo miisa 2 000 ny novelena nandritra izany ka nitarika ny fotoana ny filoha vaovaon’ny seksiona, Ramaroson Andry, notronin’ireo mpikambana sy ny mpikatroka marobe eo anivon’ity seksiona ity. Ankoatra ny fambolen-kazo, tamin’io ihany koa ny nanokafana amin’ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana ho an’ny seksiona Antananarivo Renivohitra, taranja karate. Fotoana nahafahana nampahafantatra ny tetikasa sy tanjona ihany koa, nandritra ity fambolen-kazo ity, raha ny fanazavan’ny filohan’ny seksiona, Ramaroson Andry. Nisy ny fiaraha-misakafo sy ny fanaovana fanazarantena mirindra « kihon », nandraisan’ny mpikatroka rehetra anjara. Mbola maro ny programa hotanterahina aorian’izao. Mi.Raz L’article Tontolo iainana sy fanatanjahantena: namboly zana-kazo ny Karate-Tanà Ville a été récupéré chez Newsmada.
Amadia: raisina an-tanana ireo ankizy sy tanora diabetika
Tsy tokony hisy ankizy na tanora holavon’ny diabeta. Io ny fandaharanasan’ny Amadia ho fitsimbinana ny ankizy sy ny tanora manana toe-tena diabetika “type 1”. Miompana amin’ny fandraisana an-tanana manontolo sy maimaimpoana ireo ankizy sy tanora manana io toe-tena diabetika “type” 1 io ny fandaharanasa. Afaka misitraka izany avokoa ireo ankizy diabetika manerana ny Nosy.Tafiditra amin’ny fandraisana an-tanana ny fanaovana fitiliana ny siramamy anaty vatana tokony hatao matetika. Eo koa ny fitiliana ra hijerena ny tahan’ny siramamy. Ankoatra izany ny famatsiana ny « insuline » ampiasain’ny ankizy sy ny tanora. Vatsina fitaovana ilaina manokana amin’ny fanaraha-maso ny siramamy izay tokony hatao any an-trano koa izy ireo hanamorana ny fitsaboana.Tsy terena fa misokatra ho an’ny rehetra ary maimaimpoana ny fidirana ao anatin’ny fandaharanasa hisitraka izany tolotra izany. Mila miditra ho mpikambana ao amin’ny Amadia ireo ankizy sy ny tanora manana toe-tena diabetika ireo.Atao an-taratasy ny fifanarahana amin’ny tokony hanarahana antsakany sy andavany ny fitsaboana rehetra sy ny torohevitra hanatsarana ny fahasalamana sy ny toe-tena ary indrindra ny fepetra hampiasana ny « insuline » sy ny fitaovana fijerena ny tahan’ny siramamy.Nanamarika ny Amadia fa sarotra ho an’ny tokantrano Malagasy, indrindra ireo fianakaviana sahirana ny fitsaboana ireo ankizy sy tanora diabetika. Mitentina hatrany amin’ny 3 000 000 Ar isan-taona ny fanaraha-maso rehetra tsy maintsy tokony hatao.Kendrena hiparitaka amin’ireo foibe mpanara-maso ny olona manana toe-tena diabetika miisa 14 manerana ny Nosy izao fandaharanasa izao.Manohana ny fandaharanasa ny Fondation aostralianina Life for Child sy ny Direct Relief.Tatiana AL’article Amadia: raisina an-tanana ireo ankizy sy tanora diabetika a été récupéré chez Newsmada.